शुक्रवार, माघ ७, २०७८ ०५:३८:०६ युनिकोड
भूलन लाखे, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय समिति, वाइनरी एशोसियन अफ नेपाल
बुधवार, कार्तिक १३, २०७६ यार्सान्यूज
नेपालले बार्षिक उपभोग्य वस्तुमा एक तथ्यांकअनुसार २३ खर्ब खर्च गर्ने गर्दछभने दशै, तिहारजस्ता चाडवाडमा मात्र अरवौँको उपभोग्यवस्तु आयात गर्ने गरिन्छ । नेपालमा कृषिजन्य कमोडिटी उत्पादनमा वाइन पनि एक पर्दछ । नेपाली वाइन उद्योगमा पनि विदेशी आयातको निकै ठूलो हिस्सा छ । नेपाली वाइन उद्योगमा क्रियाशील युवा फुडस्पेशलिस्ट भुलन लाखेसँग नेपाली वाइन उद्योगको अवस्था र सम्भाव्यताका बारेमा यार्सान्यूजले कुराकानी गरेको छः
नेपालमा वाइन उद्योगको अवस्था के छ ?
नेपालमा दर्ता भएर चलेका करिव ८५ वटा वाइन उद्योग छन् । यसमध्ये व्यवसायिक उत्पादन गरिरहेका करिव २० वटा उद्योगहरु मात्र रहेका छन् । नेपालको पहिलो वाइन व्यवसायिक व्रान्डिङ भएको डाँडाघरे वाइन हो, जो उद्योग ४० को दशकमामा स्थापित भएको थियो ।
वाइनलाई नेपाली समाजले रक्सी नै बुझ्छ । यो कुन क्याटोगरीको पेय पदार्थ हो ?
अन्नबाट उत्पादन हुने वियर, ह्विस्की, भोडाका र कुहिने प्रकृतिको फलफूलबाट वाइन र व्रान्डी वन्दछ । उखुबाट रम वन्दछ । विदेशमा फलफूलमा आधारित वाइन अन्तःशुल्क नै लाग्दैन । अन्नबाट उत्पादन हुनेलाई धेरै अन्तःशुल्क लाग्छ । हाम्रोमा फलफूलमा आधारित वाइनलाई अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
विदेशमा फलफूलको वाइनलाई किन अन्तःशुल्क लगाइदैन ?
फलफूल छिटो कुहिने वस्तु हो । फलफूलको व्यवस्थापनमा किसानलाई निकै चाप पर्छ । विदेशमा पनि कुनैले लगाइ रहेका पनि छन् । फलफूलमा अन्तःशुक्ल लगाउनु उपयुक्र्त होइन । नाश भएर, कुहिएर जाने फलफूललाई प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु राज्यका सहयोगी हुन् । तिनले कुहिने चिजलाई कमोडिटीमा फेरिदिएर सुरक्षित गर्छन् । नष्ट हुने, खेर जाने चिजको उपयोग गर्नु भनेको राज्यका लागि फाइदाजनक हो, त्यसैले अन्तःशुल्क नलाग्ने बनाइएको हो ।
नेपालका वाइन उद्योगहरु के नेपाली फलफूलमै आधारित छन् त ?
राजश्व विभागले वाइन उद्योगहरुलाई जति पनि लाइसेन्स दिएको छ, ति सवैलाई स्वदेशी फलफूलमा आधारित भनिएको छ । तर जति पनि वाइन उद्योग छन् । तिनले विदेशी फलफूलको नै उपयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालको वाइन उद्योगमा विदेशबाट सवैभन्दा बढी आउने फलफूल अंगुर नै हो । यो अंगुरको व्यवसायिक खेती नेपालमा पनि सम्भव छ । राजश्व विभागले स्वदेशी फलफूलबाटै बनाउनका लागि कडिकडाउ गरेको छ । वाइन उद्योगहरु अव विस्तारै विदेशीबाट स्वदेशी फलफूलमा जान्छन् र जानुपर्छ ।
नेपालमा वाइन उद्योगका लागि उपयुक्त फलफूलहरु कुन कुन हुन् ?
अंगुर, स्याउ, चुत्रो, भूइँस्याउ, नासपातीको प्रयोग गरेर वाइन वनाउने अभ्यास गरिएको छ । नेपालमा सवैभन्दा राम्रो अंगुरको भएको छ ।
वाइनमा अल्कोहलको मात्रा त हुन्छ नै । खासमा अल्कोहल कुन उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुन्छ ?
वाइन उमेर पुगेको स्वस्थ मान्छेले खाँदा खासै असर गर्दैन । अल्कोहलको प्रतिशत १५ सम्म छ भने त्यो वाइन हो । ६.५ सम्मलाई वियर । भोड्का ४० देखि ४२, ह्विस्कीमा ४० देखि ४२, रममा पनि ४२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल हुन्छ । लोकल रक्सीमा २२ देखि २८ प्रतिशतसम्म अल्कोहल हुन्छ । यसरी हेर्दा वाइनमा त्यतिधेरै अल्कोहल हुँदैन ।
नेपाली वाइन उद्योगहरु आयातमुखी कहिलेसम्म भइरहन्छन् ? निर्यातमुखी उद्योगहरु सम्भव छैन ?
नेपालमा वाइन उत्पादन निर्यातमूलक हुन सम्भव छ तर वैंकिग प्रणालीमा सुधार हुनु जरुरी छ । पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । वाइन उद्योगमा ठूलो लगानी नगरी निर्यातमूलक बनाउन सम्भव छैन । नेपाली घरेलु बजारकेन्द्रित उद्योगबाट निर्यातमूलक उत्पादन सम्भव छैन ।
नेपाली वाइन उद्योगले सीमित बजार क्षेत्र ओगटेर, सानो पुँजीको लगानीमा आधारित छन् । विकसित प्रविधि, कच्चा पदार्थ र विशेषज्ञ जनशक्तिको परिचालन गर्न सक्ने गरी वाइन उद्योग स्थापना भएपछि मात्र विश्व बजारको मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य स्वयम् सचेत हुनु पर्ने हो ।
विदेशी बजारमा गुलियोको मात्रा राम्रो मानिदैन । नेपालमा गुलियो वाइन मात्र चलिरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रि बजारको प्रवृत्तिलाई नेपाली वाइन उद्यमीहरुले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । साना लगानीबाट वाइन उत्पादन गरेर विदेशी बजारमा निर्यातको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
नेपाली वाइनको व्रान्डिङ किन हुन नसकेको हो ?
फ्रान्सको स्याम्पियन क्षेत्रबाट उत्पादित वाइनलाई मात्र स्याम्पियन वाइन भन्न पाइन्छ । नेपाली बजारमा चार हजारदेखि लाखौँ रुपैयासम्मको स्याम्पियनका व्रान्डहरु पाइन्छन् । यो क्षेत्रगत व्रान्डिङको अभ्यास वाइनमा भएको छ । स्कच हिवस्की स्कटल्याण्डले नै व्रान्डिङ गरेको छ । टकिलाजस्तो रक्सी मेक्सिकोले व्रान्डिङ गरिरहेको छ । हाम्रा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरबाटै उत्पादन र व्रान्डिङ गर्न सक्छ । यो व्यक्ति विशेषबाट सम्भव छैन । यो राज्यको दायित्व हो । हाम्रोमा कर्णालीको स्याउको वाइन व्रान्डिङ गर्ने कि मुस्ताङ मार्फा व्रान्डिङ गर्ने अथवा नेवा अएला व्रान्डिङ गर्ने त्यो राज्यको दायित्व हो ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक १३, २०७६, ०९:०२:००